WAR DEG DEG AH: Akhriso: Madaxweyne Gaas oo magacaabis degdeg ah sameeyay ka hor inta uusan ka tagin Garowe, Yuu magaacabay? – Puntland News.net
Home 2017 February 6 Somali News WAR DEG DEG AH: Akhriso: Madaxweyne Gaas oo magacaabis degdeg ah sameeyay ka hor inta uusan ka tagin Garowe, Yuu magaacabay?
WAR DEG DEG AH: Akhriso: Madaxweyne Gaas oo magacaabis degdeg ah sameeyay ka hor inta uusan ka tagin Garowe, Yuu magaacabay?
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sameeyay magacaabis degdeg ah oo uu kaga jawaabayo ammaan xumada ka jirta magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari, halkaas oo bilihii iyo todoboyaadyadii ugu dambeysay hoy unoqotay dilal qorshaysan iyo weeraro kooxaha argigixisadu maleegeen.
Madaxweyne Gaas ayaa magacaabay guddi si gaar ah uga shaqeyndoono soo celinta amniga magaalada Bosaso, kadib markii hay’addaha u xilsaaran amniga gobolka Bari ay ku fashilmeen inay kasoo baxaan waajibaadka loo xilsaaray ee ah inay ummadda amigooda ilaaliyaan.
Guddigaan ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda Puntland Eng. Siciid Maxamed Raage, waxaana xubno ka ah wasiirka maaliyadda iyo wasiirka beeraha, waxaa la faray inay si degdeg ah ugu howlgalaan xaqiijiyna amniga Bosaso.
Sidoo kale, madaxweyne Gaas ayaa magacaabay guddiga horumarinta iyo amniga magaalada Gaalkacyo kadib markii guddiyadii horey u dhisnaa ay wax ka qaban waayeen xaalada cakiran ee weli ka jirta magaalada Bosas.
One thought on “WAR DEG DEG AH: Akhriso: Madaxweyne Gaas oo magacaabis degdeg ah sameeyay ka hor inta uusan ka tagin Garowe, Yuu magaacabay?”
Hassan February 6, 2017 at 9:33 am · Edit
Bosaso waa ku deysey hadana shacabka degaanku gacan adag iskaga qaban arimaha dahsoon ee meelaha kale laga soo abaabuley ee isis & wax la mid ah manaulkuna dacad kama aha arimaha degaanka ee suyaasado kale buu ku jiraa ee dalka d gankaba dani ugu jirin eefafhiga ka ca reer puntland